यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ
हाम्राेखबर शुक्रबार​, कात्तिक १५ २०७६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक रात र दुई दिन अस्पतालमा विताएर बालुवाटार फर्कीएका छन । देशकै सुविधा सम्पन्न र महंगो मानिएको एक नीजि अस्पतालमा उपचार गरेर उनी प्रधानमन्त्री निवास फर्कीएका हुन । ती दुई दिन सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका बाहेक उनलाई के भएको हो र के को उपचार भइरहेको छ ? त्यसबारेमा आमनागरिक बेखबर रहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली विगत केही समयदेखि विरामी पर्दै आएका छन । भदौ अन्तिममा दोस्रो पटक सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्कीएका उनी बुधबारदेखि पुनः अस्वस्थ बनेका हुन । लामो समयदेखि उनी मिर्गौलाका विरामी हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक रात र दुई दिन अस्पतालमा विताएर बालुवाटार फर्कीएका छन । देशकै सुविधा सम्पन्न र महंगो मानिएको एक नीजि अस्पतालमा उपचार गरेर उनी प्रधानमन्त्री निवास फर्कीएका हुन । ती दुई दिन सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका बाहेक उनलाई के भएको हो र के को उपचार भइरहेको छ ? त्यसबारेमा आमनागरिक बेखबर रहेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली विगत केही समयदेखि विरामी पर्दै आएका छन । भदौ अन्तिममा दोस्रो पटक सिंगापुरमा उपचार गराएर फर्कीएका उनी बुधबारदेखि पुनः अस्वस्थ बनेका हुन । लामो समयदेखि उनी मिर्गौलाका विरामी हुन् । १२ वर्षअघि उनमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित एक अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । अहिले त्यही प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले राम्रो काम गर्न नसकेपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका हुन । अहिले उनको डायलासिस गर्ने क्रम जारी छ ।
मिर्गौलाले रगत सफा गर्न नसकेपछि प्रविधिको माध्यमबाट रगत सफा गर्ने विधिलाई डायलासिस भनिन्छ । डायलासिसबाट रगतमा जम्मा भएको फोहोर तत्व, अनावश्यक नुन, पानी हटाउने गरिन्छ । तर मिर्गौला रोग विशेषज्ञका अनुसार यो उपचार अस्थायी हो । यसको उपचार भनेको नयाँ मिर्गौलाको प्रत्यारोपण नै हो । तर यो चाँडो संभव छैन । र दोस्रो पटक प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले सहजै काम गर्ला भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई चाँडो स्वास्थ्यलाभ होस् । यो हाम्रो कामना हो । तर बिमारका कारण प्रधानमन्त्री लामोसमयसम्म दैनिक कामकाजमा फर्कन सकेनन् भने त्यसको नकारात्मक असर मुलुक संचालनमा पर्ने सबैमा जगजाहेर नै छ ।
चिकित्सकहरुको सुझाव अनुसार आफ्नो उपचारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब दुई विकल्प छन । पहिलो, आफूलाई स्वस्थ्य राख्न कम्तिमा पनि साताको २ पटक मिर्गौलाको डायलासिस । दोस्रो, पुनः मिर्गौलाको प्रत्यारोपण । तर ६८ वर्ष पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीमा पुनः दोस्रो पटक मिर्गौलाको प्रत्यारोपण त्यति सहज नहुने र त्यसले पूर्णतया काम गर्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि नरहने मिर्गौला रोग विज्ञहरुको भनाई छ ।
अर्को कम्तिमा हप्ताको २ पटक डायलासिस गर्न पनि समय र विरामीको अवस्थामा भर पर्ने हुन्छ । यतिबेला कतिपयले डायलासिसले ३० वर्षसम्म काम गरेको तर्क पनि गरेका छन । तर्क जे जस्तो भए पनि यस्ता बिरामीका लागि आराम पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको पद त्यस्तो हो, जहाँ फूर्सदको समय प्रायः कम नै हुन्छ । विहान उठेदेखि राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्री ब्यस्त रहने गर्छन् । त्यहाँमाथि पार्टीको अध्यक्षसमेत रहेकाले त्यसको काम त छँदैछ ।
प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा सरकार कमजोर बन्ने त छँदैछ भने मुलुकको दैनिक प्रशासन समेत भताभुङ्ग हुनेमा दुइमत छैन । अझ डरलाग्दो समस्या भनेको प्रशासनले सरकारलाई नटेर्ने खतरा बढ्छ । यसले थप अराजकता बढ्ने निश्चित छ । पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले यी विषयहरु बुझेकै छन र मनन् पनि गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री ओली नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा हुन । देशमा लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि उनी र उनको पार्टीको योगदान कसैबाट छिपेको छैन । त्यस्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका समयमा उनले खेलेको भूमिका स्मरणयोग्य छ । नयाँ संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो आमनिर्वाचनमा तत्कालिन माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर उनले पार्टीलाई बिजयी बनाएको श्रेय उनैलाई जान्छ । भाषणमा होस् वा संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको देशमा परिवर्तन ल्याउने इच्छाशक्क्ति सबैले देखेकै छन ।
बिडम्बना नै मान्नुपर्छ नेपालका राजनीतिक दलहरुमा एउटा चलन नै रहेको छ, प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि पार्टीको कामको जिम्मेवारी अन्य नेताहरुलाई नदिने । र आफू पनि नगर्ने । दलका नेताहरु बीच एक पद एक जिम्मेवारीको विषयमा छलफल नभएको होइन् तर शक्तिशाली पदमा पुगेपछि स्वयंम ती कुरा आफैं हराउँदै जाने गरेका छन । अहिले नेकपाभित्रको स्थिति पनि यस्तै रहेको छ । अझ दुईदुई जना अध्यक्ष छन कसको के जिम्मेवारी हो त्यो पनि प्रष्ट छैन । भलै पार्टी एकीकरणको प्रकृयामा रहेकाले यस्तो अवस्था देखियो होला ।
उसो त नेकपा सचिवालयको बैठकमा पनि एक व्यक्ति एक पदको कुरा नउठेको हैन । तर यस्ता कुरालाई प्रधानमन्त्रीले सुन्ने चाहना नै राखेनन् । जसले यो कुरा झिके बरु उनीसँगै बाजाबाजको स्थिति आयो । तिहारअघि नै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीब्र बनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति कार्यान्वय गर्न अटेर गरेको गुनासो पनि पोखिसकेका छन । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले त प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्न सुझाए पनि । तर प्रधानमन्त्री आजका दिनसम्म टहसको महस देखिन्छनर ।
हो देशलाई प्रधानमन्त्री ओली जस्ता नेताको आवश्यकता अझ पनि छ । देशलाई तीब्ररुपमा विकसित गरेर परिवर्तन गर्ने उनको इच्छाशक्ति साच्चिकै प्रशंसनीय छ । तर यहाँ सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण विषय भनेको उनको स्वास्थ्यको हो । गंभीर विरामीबाट गुज्रीरहेका प्रधानमन्त्रीलाई यतिबेला आरामको आवश्यकता छ । उनले कत्ति पनि लोभ नगरी पार्टीका अन्य नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिन ढिला गर्नुहुन्न । पार्टीमा नेताहरुको खाँचो देखिदैन । त्यसकारण पनि भन्न सकिन्छ– अब प्रधानमन्त्री ओली सामुन्ने दुई विकल्प छन । पहिलो, आफू असक्त हुँदाहुँदै पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भएर देश चलाउने । दोस्रो, यी दुवै जिम्मेवारीबाट अलग भई पार्टी र देशकै संरक्षक भएर बाँकी जीवन विताउने । यतिबेलाको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो विकल्पलाई रोज्न सके सबैभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ ।